5BB Express WiFi by Facebook – GlobalNet
5BB Express WiFi by Facebook
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ချစ်သူတွေအတွက် 5BB Express WiFi by Facebook
သင်ဟာ … ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို တစ်ရက်အချိန်ဘယ်လောက်သုံးလဲ။ ဘယ်လိုအချိန် ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အများဆုံး သုံးရှိလဲ၊ ပြီးတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေ ဘယ်တွေကြည့်ဖြစ်လဲ ?
ဒါက အပျော်သဘောမေးလိုက်တာပါ။ သတင်းကောင်းပေးချင်တာက လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာ လူသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးရှိမယ့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုအကြောင်းပါ။
မြန်မာ့အမြန်ဆုံးအင်တာနက်ဆုတံဆိပ်ရ 5BB Broadband က ကမ္ဘာကျော် Facebook ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်းကာ မြန်ဆန်ပြီး အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Wi-Fi အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကြီးကို မြန်မာပြည်က ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ချစ်သူတွေအတွက် ယူဆောင်လာခဲ့ပါပြီ။
Express Wi-Fi ဟာ Facebook Connectivity အစီအစဉ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပိုမို မြန်ဆန်တဲ့ အင်တာနက်နဲ့ လူတွေ အွန်လိုင်းအသုံးပြုလာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ၊ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရန် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ Express Wi-Fi ပလက်ဖောင်းကို နိုင်ငံပေါင်း ၂၅ နိုင်ငံကျော်မှာ အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
အိုကေ . . . မြန်မာ့အင်တာနက်ဘုရင် 5BB နဲ့ ကမ္ဘာ့ဆိုရှယ်မီဒီယာဘုရင် Facebook တို့ပူးပေါင်းပေးတဲ့ Wifi Internet service က ဘယ်လိုများဖြစ်မလဲ ?
ယခုဝန်ဆောင်မှုအသစ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အင်တာနက်ဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ဈေးနှုန်းမြင့်မားမှုတွေကြုံနေရတဲ့ နေရာဒေသတွေကို “5BB Express WiFi by Facebook” ရဲ့ အရည်အသွေးမြင့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။
အများပြည်သူအသွားအလာများတဲ့ ဈေးဝယ်စင်တာတွေ၊ စူပါမားကက်တွေ၊ ပန်းခြံတွေ၊ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တွေ၊ ရထားဘူတာတွေမှာ “5BB Express WiFi by Facebook” ကို ရယူအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ လက်ရှိမှာ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ မန္တလေးမြို့တို့မှာ စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး လာမယ့်နှစ်နှစ်အတွင်း အသုံးပြုနိုင်တဲ့နေရာပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော် တပ်ဆင်ဖန်တီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁) သင့်ရဲ့ (ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ တက်ဘလက်၊ အစရှိတဲ့) နည်းပညာပစ္စည်းတစ်ခုမှာ Wi-Fi ကို ဖွင့်ပြီး Express Wi-Fi ရနိုင်တဲ့ ဘယ်နေရာမှာမဆို Express Wi-Fi ဆိုတဲ့ အမည်ကို ရှာပြီး ချိတ်လိုက်ပါ။
(၂) အဲဒီနောက် တွေ့မြင်ရတဲ့ Portal နေရာကနေ သင့် မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ် ရိုက်ထည့်ပြီး login ဝင်လိုက်ပါ။
(၃) အတည်ပြုဖို့အတွက် သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကို ပို့လိုက်တဲ့ OTP/PIN နံပါတ် ရိုက်ထည့်ပြီးရင် login ဝင်တဲ့ အဆင့် ပြီးသွားပါပြီ။
(၄) 5BB ၏ Express wifi အခမဲ့ရရှိနိုင်သော location များကိုသိရှိနိုင်ရန် mobile application ကို download ရယူနိုင်ပါသည်။
(၅)5BB Express WiFi by Facebook ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးပထမဦးဆုံး တစ်နာရီအတွင်းအသုံးပြုနိုင်သော 100 MB ကိုရယူအသုံးပြုနိင်ပါသည်။
(၆)ကြော်ငြာကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့် နောက်ထပ် အပိုဆောင်းလက်ဆောင် အနေဖြင့် တစ်နာရီအတွင်းအသုံးပြုနိုင်သော ၅၀၀ MBထပ်မံရရှိမှာဖြစ်ပြီး 5BB Express WiFi by Facebook ကို အခမဲ့သုံးပြီး ကမ္ဘာကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။
5BB Express WiFi by Facebook ကို အခမဲ့သုံးပြီး ကမ္ဘာကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။
Why is havingaSurveillance System important for
5BB Broadband Empowers Communities with Game Chang
How to customer support DIA Services